Ukhala ngosizo ohlukunyezwa ngokade esejele | IOL Isolezwe
Ukhala ngosizo ohlukunyezwa ngokade esejele
Isolezwe / 13 December 2012, 3:00pm /
UTHI akazi usinde kanjani esokeni lakhe ebelifuna ukumbulala uNksz Wondergirl Wawa Zikhali waseLamontville ogwazwe amanxeba ayisikhombisa yisoka angasalifuni. Izithombe: SIBUSISO NDLOVU
UTHI akazi usinde kanjani esokeni lakhe ebelifuna ukumbulala uNksz Wondergirl Wawa Zikhali waseLamontville ogwazwe amanxeba ayisikhombisa yisoka angasalifuni Izithombe :SIBUSISO NDLOVU
UDINGA noma yiluphi usizo ukuze avikeleke owesifazane waseLamontville ophila impilo enzima yokuhlukunyezwa ngowesilisa obeyisoka lakhe osanda kumgwaza amanxeba ayisikhombisa emzimbeni emhlasela kubo ngoba emphoqa ukuthi babuyelane.
UNksz Wondergirl Zikhali (34), uthi lona wesilisa umhlukumeza nje kade esejele edonsa isigwebo seminyaka engu-15 ngokuphanga, nokubulala kodwa useneminyaka eyisithupha aphuma ejele.
Uthe kusukela emtshele ukuthi ucu alusahlangani entanyeni ngo-Okthoba 7 kulo nyaka, uyamshaya umfikela kubo akasazi okumele akwenze.
UNksz Zikhali uthi usezamile ukubika kwabomthetho kwanhlanga zimuka nomoya, manje usedinga noma yiluphi usizo ukuze aphume kulolu sizi azithola esekulo.
“Sekukaningi isoka lami lingishaya, ngilubika lolu daba kodwa namanje angikasizakali. Njengoba lingigwazile ngoLwesihlanu amanxeba ayisikhombisa ngalivula icala ngibuya esibhedlela ngaphinde ngabika nakumuntu asayina kuyena wezamajele ngoba usasayina njalo, kuyaziwa ukuthi ukuphi kodwa akukho okwenzekayo. Uvele angifonele angisabise yize ngibikile,” kusho uNksz Zikhali.
Uthe kuyimanje uyesaba ngoba le ndoda edume ngelikaMajuba elokishini iyamsabisa imtshele ukuthi uzowukhomba umuzi onotshwala njengoba engalesuli icala.
“Ngicela usizo emaphoyiseni nasezikhulwini zamajele ngoba sengiphilela ithuna manje. Bekusongwa i-16 days of Activism for no-Violence against Women and Children njengamanje kodwa mina angivikelekile ngiyashaywa, ngiyagwazwa nabantu okumele bangivikele abangisizi ngalutho,” kusho uNksz Zikhali.
Uthe isoka lakhe lineminyaka eyisithupha laphuma ejele kanti lisasayina namanje kodwa nabo abasejele abamsizi uma ebachazela ngokuthi liyamhlukumeza.
Esitatimendeni esithunyelwe ngu-Colonel Jay Naicker wamaphoyisa esifundazweni ukuqinisekisile ukuthi kuphenywa icala lokushaya ngenhloso yokulimaza kanti bekungakaboshwa muntu njengoba kusaqhubeka uphenyo lwamaphoyisa.
Uthe uma umphenyi wecala ehlabe ikhefu icala liye lidluliselwe kuzakwabo okhona osuke ezolibhekelela kuze kuba uyabuya loyo osuke esahambile.
“Icala lokushaya ngenhloso yokulimaza lingavulwa kunoma yisiphi isiteshi futhi abasuke bevule leli cala bayahlonishwa banakekelwe. Ngicela ummangali akhulume nomphathi siteshi uma engeneme ngendlela icala lakhe eliphethwe ngakhona. Sizokwenza konke okusemandleni ukumsiza,” kusho uColonel Naicker.